Umatshini womkhenkce wetyhubhu-Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
3T / imini ityhubhu umatshini ice
5T / imini ityhubhu umatshini ice
10 / imini ityhubhu umatshini ice
20T / imini ityhubhu umatshini ice
Ikopi yezona zingcono kwaye zingcono kunezona zilungileyo.
Ngokwahlukileyo kwezinye iifektri zoomatshini bomkhenkce, iinkqubo zeHerbin Ice zancama ubuchwephesha bomkhenkce obuhlwempuzekileyo baseTshayina ukusukela ngo-2009. Sikope ubuchwepheshe beVogt ukusukela ngo-2009.
IHerbin ice Systems yathenga oomatshini beVogt abasele besebenzile imodeli P34AL, ukusuka kwiplanti yomkhenkce yaseTshayina ngo-2009. Sayichitha, sakopa onke amacandelo kunye noyilo lwenkqubo.Sisebenzisa abaxhasi becandelo elifanayo njengeVogt, njenge-Parker fluid level sensor, i-Parker ivalve yoxinzelelo oluqhubekayo njalo njalo.Sikopa unikezelo lwe-Vogt oluhlakaniphile lolwelo, songeza umamkeli wolwelo ngaphezulu kwe-evaporator ukunqanda ukutyibilika kolwelo kwicompressor, songeze abatshintshi bobushushu bangaphambili ukuphucula ukusebenza kweenkqubo.Senze nophuculo oluninzi olusekwe kuloo kopi ukwenza oomatshini bethu bomkhenkce ityhubhu bagqibelele kangangoko.
Iingcali zithi oomatshini bam bomkhenkce ityhubhu bangcono kuneVogt ngoku, kuba inkqubo yethu yokujikeleza kweoyile igudileyo, kwaye uyilo lwethu lusebenziseka ngakumbi.
Enkosi kubuchwephesha bethu obuphezulu kunye noyilo lwenkqubo ekrelekrele.Oomatshini bethu bomkhenkce ityhubhu basebenzisa umbane omncinci osetyenziselwa ukwenza umlinganiselo ofanayo womkhenkce.
Umzekelo, masibale ngomatshini womkhenkce we-20T/day.
Amanye amanzi aseTshayina apholileyo oomatshini bomkhenkce baseTshayina basebenzisa i-100KWH yombane ukwenza yonke itoni yomkhenkce.
Oomatshini bam bomkhenkce beTube basebenzisa kuphela i-75KWH yombane ukwenza yonke itoni yomkhenkce.
(100-75) x 20 x 365 x 10 = 1825000 KWH.Ukuba umthengi ukhetha umatshini wam we-ice 20T Tube, uya kugcina i-1825000KWH yombane kwiminyaka eyi-10.Yimalini i-1825000KWH yombane kwilizwe lakho?
3. Umgangatho olungileyo kunye newaranti ende.
I-80% yamacandelo kumatshini wam we-Tube we-ice afana okanye afana neVogt.
Amanye amacandelo angeniswa evela e-USA ngokuthe ngqo.
Oko kukuqinisekisa ukuba ukumgangatho olungileyo koomatshini bomkhenkce beTube abanowona msebenzi ubalaseleyo wokusebenza.
Iwaranti yenkqubo yefriji yiminyaka engama-20.Ukuba ukusebenza kwenkqubo yesikhenkcisi kuyatshintsha kwaye ibe yengaqhelekanga kwiminyaka engama-20, siya kuyihlawula.
Asifuni ngaphezulu kweentsuku ezingama-20 ukwenza oomatshini bomkhenkce beTube babe bancinci kune-20T/ngosuku.
Asifuni ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 ukwenza oomatshini bomkhenkce beTube phakathi kwe-20T/ngosuku ukuya kuma-40T/ngosuku.
Umthengi akayi kulinda ixesha elide ukufumana oomatshini be-Tube ice emva kwentlawulo.
Nalu uluhlu lweeparamitha zoomatshini bam bomkhenkce beTube obuqhelekileyo kwireferensi yakho.
Oomatshini bomkhenkce betyhubhu banokwenziwa ngokwezifiso, kwaye iparamitha inokwahluka ngokufanelekileyo.